ရွာသားများကို နှိုးဆော်ပါကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသားများကို နှိုးဆော်ပါကြောင်း
Posted by ရွှေဘိုသား on Jun 18, 2011 in Copy/Paste | 24 comments
ကျွန်တော် တကယ်ကို နှိုးဆော်ပါတယ်ရွာသားတို.ရေ။ ဘာကိုလည်းဆိုတော. ကျွန်တော်တို. ဆိုဒ်က မန်ဘာဝင်တွေ အကုန်အပြင်မှာတွေ.ပြီး အလှုအတန်းလေး
ဘာလေးလုပ်ဖို.တိုင်ပင်ချင်ပါတယ်။ ရွာထဲက တစ်ချို.လူတွေလည်းသိမှာပါ www.mutdfan.com ဆိုတဲ. အားကစားဆိုဒ်ကလူတွေတောင် အလှုတွေလုပ်ကြ
ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း တကယ်အားကျမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို.ဘယ်လိုလည်း မလုပ်ချင်ကြဘူးလား အားလုံးအလုပ်ကိုယ်စီနဲ.ဆိုလည်း အားတဲ.လူ
တစ်ယောက်လောက်က ဦးဆောင်ပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ မိဘမဲ.ဂေဟာတို. သီလှရှင် ကျောင်းတို. တကယ်ကို ဆွမ်းရှားပါးတဲ. ကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ
လှုချင်ပါတယ်။တကယ်လုပ်မယ်ဆို မနက်ပိုင်း ထမင်းကြော် (သို.) မုန်.ဟင်းခါးနဲ. အချိုပွဲ ပါတာတောင်မှ အလွန်ဆုံး သုံးသိန်းကျော် လောက်ပဲကျပါတယ်။ လူဦးရေ
100စာလောက်ပြောတာနော်။ဦးဆောင်ပြီး လုပ်မဲ.လူရှိရင် အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ခွဲတမ်းအနေနဲ.ကတော. အပြင်မှာ တွေ.ပြီးမှ တိုင်ပင်လို. ကောင်းပါလိမ်.မယ်။
ဘာ.လို.လည်းဆိုတော. ဒါမှ အဖွဲ.၀င်ဘယ်လောက်ရှိလည်းဆိုတာ သိ၇မှာမို.ပါ။ ကျွန်တော် တွက်ကြည်.တာကတော. တစ်ယောက် အလွန်ဆုံးကျ 7000 လောက်
ပါပဲ။အဖွဲ.၀င် အနည်းဆုံး 50 လောက်တော. ရန်ကုန်မှာတင် ရှိလောက်မယ်လို.ထင်ပါတယ်ခဗျာ
ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကို ပြောတာပါ။ အားလုံးအားလပ်မဲ.အချိန် ဆိုရင်လည်း သီတင်းကျွတ် ဆိုရင်တော. အလှုလုပ်ရတာ ပိုကောင်းပါ.မယ်လို.ထင်ပါတယ်။
အကုန်လည်း အလုပ် နားကြပါလိမ်.မယ်လို. ကျွန်တော်ထင်လို.ပါ။ သီတင်းကျွတ်လပြည်. နေ.တို.မှာပေါ.။ကျွန်တော်က တော.အလုပ်နားရက်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ.
အဲဒီလို လုပ်ချင်လို. အပြင်မှာတွေ.မယ် တိုင်ပင်မယ်ဆိုရင်တော. အချိန်ပိုင်းခွင်.ယူပြီး လာချင်ပါကြောင်း။ ကျွန်တော်ကတော. အဝေးသင်တက်ဖို. ခွင်.ယူရမှာဖြစ်
တာကြောင်း အခုနားရက်မရပါကြောင်းတော. ကြိုပြောထားချင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ခေါင်းရှောင်တာမဟုတ်ပါကြောင်းကို တိုင်တည်ပြီးပြောရဲပါတယ်ခဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း ဦးဆောင်လို. မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း အသက်ရွယ်အားဖြင်. ရော အတွေ.ကြုံအားဖြင်.ရော ဘယ်သူမှ လေးစားမှာ မဟုတ်ပါကြောင်း။ဒီလို အလှုတန်းကို
ဦးဆောင်တဲ. သူကလည်း အစအဆုံးဦးဆောင် နိုင်သော သူသာဖြစ်သင်.ပါတယ်ခဗျာ။ စိတ်အားထက်သန် တဲ.လူများရှိရင် ဦးဆောင်သင်.ပါကြောင်းအကြံပြုပါတယ်။
ဦးဆောင်မဲ. သူရှိရင် ကြိုဆိုပါကြောင်း နောက်ကနေ ရဲရဲလိုက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါကြောင်း။
ေ၇ွှဘိုသား .. ရဲ့အကြံက ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။
ဒီရွာထဲမလဲ (စိတ်ကောင်းရှိသူတွေများလို့) အလှူအတန်း ၀ါသနာပါမယ့် ရက်ရောတဲ့သူတွေ များမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီဆိုက်က social site သက်သက်မဟုတ်လို့ ကိုယ်ဘယ်သူမှန်း အသိမခံချင်သူတွေလဲ များပုံရပါတယ်။
နှိုးဆော်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ရင် စိတ်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ၀င်ပြောပြတာပါ။
အလှူအတန်း ကိစ္စကတော့ ကောင်းပါတယ်…. မန်ဘာတွေ ဆုံပြီးမှ လှူဖို့ ဆိုတာကတော့ မလွယ်ပါဘူး…မန်ဘာတွေ့ဆုံပွဲလေး လုပ်တဲ့ ရလဒ်ကိုပဲ ကြည့်ပါ… တကယ်လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ကို အကူညီတောင်းရမှာပါ…ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းမှာ”ဒေါက်တာ ဇော်ထွန်း သွားဆေးခန်း” ဆိုပြီး ကြော်ငြာထားတာလား၊ ဘာလားမသိတခုတွေ့တယ်..အလှူခံ အတွက် အဲလိုမျိုး နေရာလေး တခု မှာ ကြောငြာထားပြီး၊ အချိန်ပေး အားတက်သရောလုပ် နိုင်မယ့် သူတယောက်(သို့)၃၊၄ ယောက် လောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့လေးက အလှူငွေကို လက်ခံပေါ့..ပြည်ပမှာ၇ှိတဲ့ သူတွေကလည်း တိုက်ရိုက်ပေးဖို့မလွယ်ရင် ဆိုဒ်ပိုင်ရှင် ဆီက တဆင့်လှူကြပေါ့…အလှူငွေတွေကို စုထားပြီး ၄ လတကြိမ်:(သို့)၆ လတကြိမ်လောက် နီးစပ်ရာ မန်ဘာတွေစုပြီး လှူသင့်တဲ့နေရာတွေ မှာလှူကြပေါ့.ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လှူဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့ သူတွေလည်း သွားလို့ရတာပဲ.အလှူက photo တွေကိုလည်း ဆိုဒ်မှာ ပြန်ဖော်ပြထားပေါ့….မလှူခင် ရရှိထားတဲ့ အလှူငွေတွေကို ဆိုဒ်မှာ top 10 စာရင်းဖော်ပြထားသလို မျိုးလေး hide လုပ်ပြီးတော့ ဖော်ပြပေးထားပေါ့…( နာမည်နဲ့ တကွ ဖော်ပြထားရင်တော့ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြိုင်အဆိုင် လှူကြမယ် ထင်ပါတယ်..) အရေးကြီးတာက အလှူငွေလက်ခံမယ့် သူက မန်ဘာတွေ ယုံကြည်နိုင်မယ့် သူဖြစ်ပြီး ဆိုဒ်ပိုင်ရှုင်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအရ ခင်မင်တဲ့သူဖြစ်ရင်တော့ ပိုစိတ်ချရတာပေါ့….
ဖြစ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပေမယ့်၊ဖြစ်နိုင်ခြေ ကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွှေးကြည့်တာပါ…
ဒေါက်တာဇော်ထွန်း သွားဆေးခန်းက ရန်ကုန် မဂိုလမ်းမှာလို့ ကြားတယ်။ သဘောအရမ်းကောင်းတဲ့ ကုလားဆရာဝန်ကြီး ဆိုလားပဲ။ မုတ်ဆိတ်မွှေးရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ ဆေးရုံဂျူတီကုတ်ကြီးဝတ်ပြီး ဆေးခန်းကိုအမြဲလာလေ့ရှိတယ်တဲ့။ လူမြင်ရင် သူ့မှန်းတန်းသိနိုင်တဲ့ ဥပတိရုပ်ရှိလို့ တွေ့ရင်တန်းသာနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါ။
ရွှေဘိုသားပြောတဲ့ စုပေါင်းပွဲတွေကတော့ စစချင်းတပွဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားရင် ကျန်တာတွေ သူ့အလိုလို လိုက်လာလိမ့်မယ် ထင်ပါသည်။ ရွာထဲက အန်တီဆူးတို့၊ အီးတီတူမ အီးတုံး ဆိုတာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဒေါ်ပုဒုမ္မာတို့၊ မမ မြန်မာ့မီးရထား တို့လို အတွေ့အကြုံရှိသူများလည်း ရှိပါတယ်။ ကြောင်ကြီးကတော့ လူအများအိပ်မောကျချိန် ညအမှောင်ထုထဲကနေ စောင့်ကြည့်နေမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း…..
ကိုကြောင်ကြီး သွားတွေက အဲဒီဆေးခန်းမှာ တစ်ခါပြဘူးပါတယ် အဲဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း ကိုကြောင် သွားမကောင်းဘူးလို့ တစ်ခါမှ ပြောသံမကြားရတာပေါ့
ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်က မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေ တင်ပေးတဲ့ ရွာသားတွေကို.. (သတင်းစာမှာဖေါ်ပြဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်၇င်) ငွေတိုက်ရိုက်ပေးတဲ့… အစီအစဉ်ရှိပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့…အဲဒီငွေက.. တင်ပေးတဲ့သူကမရပဲ.. မြန်မာပြည်တွင်းက… ဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ လူမှုရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့… တနေရာရာကို လှူပေးမယ်ဆိုပြီး.. သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်.။
သဘောက.. သတင်းတင်ပေးသူက.. အလှူရှင်ဖြစ်မယ်ပေါ့..။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ… ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားကြပါ..။
ကြည့်ရတာ… . နတ်ဘုံနဲ့ မြှောက်..။ ငရဲနဲ့ခြောက်မှ ရမယ်ထင်ရဲ့..။
နောက်တခုက… သတင်းစာမှာသုံးဖို့.. မြန်မာပြည်တွင်းက.. ဆောင်းပါးဝယ်တာပါပဲ..။
အခုလောလောဆယ်လည်း ၂၂ဒေါ်လာနဲ့ဆောင်းပါးတပုဒ် တောင်းထားတာတွေ့ရမှာပေါ့..။
အလှူလုပ်ချင်ရင်… အဲဒီအချက်အလက်တွေကို.. ရွာသားတွေကပဲစုပြီး လေ့လာ..မေးမြန်း စုရေးလိုက်ရင်ဖြစ်တာပါပဲ..။
ရတဲ့ငွေကို.. အလှူအတွက် မတည်ငွေလုပ်ပေါ့…။
အလှူငွေဆိုတာ..အကုန်လှူရတာတော့ မဟုတ်.. လုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကျစရိပ်တွေရှိပါတယ်..။ ဒါတွေအတွက်.. သုံးလည်းရတာပါပဲ..။
တချိန်ချိန်မှာ.. ရွာသားတွေစုထောင်ထားတဲ့.. တရားဝင် အန်ဂျီအိုတခုအထိတောင်မျှော်လင့်မိတာပါ.။
ဒါပေမဲ့.. စလုံးရေစ တောင်…မလှမ်းနိုင်ဖြစ်နေတော့ကာ…
* နိုင်ငံတွေအလိုက် ဆိုင်ရာဒေသက မြန်မာလှုပ်ရှားမှုသတင်း အများဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးမဲ့ မြန်မာပြည်ပြင်ပနေသူမင်န်ဘာတွေအတွက် စံနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို သတင်းစာမှာလည်း ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြကြေငြာလိုက်ပါပြီ။
ဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်နယ်တွေ၊ထိုမ်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်ပြည်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊ သြစတေးလျှစတဲ့.. နိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေ ကိုယ်နေထိုင်ရာဒေသ၊ မြို့ က မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ သာရေး၊နာရေးသတင်းတွေ၊ လက်ကမ်းစာစောင်၊ ဓါတ်ပုံတွေကို မန္တလေးဂေဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်ပေးဖို့ပါ။ သတင်းထူးသိရတာနဲ့ အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးကြစေလိုတာပါ။ အဲဒီတင်တဲ့စာတပုဒ်သတင်းတခုအတွက် မန္တလေးဂေဇက်သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ရင် သတင်းစာမူခ ၅ဒေါ်လာပေးပါမယ်။
အဲဒီငွေကြေးဟာ ပမာဏမများပေမဲ့ သတင်းစာအနေနဲ့ တလကိုသတင်း ၂၀+ပုဒ်လောက်အထိ ၀ယ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဒီငွေတွေကို ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာပဲ ရံပုံငွေတခုအဖြစ် စုထားပါမယ်။ ရွေးချယ်တာနဲ့ စုဆောင်းရထားငွေကို အစဉ်အမြဲထုတ်ပြန်ပေးနေပါ့မယ်။တကမ္ဘာလုံးရောက်နေတဲ့ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်တာမို့ ပုံနှိပ်သတင်းစာအတွက်လည်း သတင်းတွေရမယ်။ ငွေပမာဏာတခုလည်း စုဆောင်းထားနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တလ ၂၀ပုဒ်ရွေးရင်ကို ၁၀၀ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရံပုံငွေကို တနှစ်တနှစ် စုဆောင်းပြီး ယူအက်စ်မှာလုပ်တဲ့ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ကို တန်းပေးလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ပြည်တွင်းက ငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့ စာထူးချွန်တဲ့ ကလေးတွေကို ဆုချရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ နာဂစ်၊ဂီရိလိုမုန်တိုင်းခံ ဒုက္ခသည်တွေကို လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ပြန်လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆေးရုံဆေးခန်း ဆေးလိုတဲ့လုနာတွေ လှူတာဖြစ်ဖြစ် တနှစ်တခါ မြန်မာပြည်တွင်းက (ဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ )အသင်းအဖွဲ့ (သို့)နေရာတနေရာ ဒါမှမဟုတ် ပညာတော်သင်ဆု..ဒါမှမဟုတ်..တခုခု…ကို (အများဆန္ဒကောက်ခံပြီး) အားလုံးကိုယ်စား ငွေသားအနေနဲ့ လှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရွေးချယ်မှုကိုလည်း စာဖတ်သူတွေအားလုံးက အများဆန္ဒနဲ့ မဲပေးရွေးချယ်တဲ့ နေရာကိုပဲ ပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေးပို့ သူများက မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်း တိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးရှိမဲ့နေရာတွေလှူတန်းသူ အလှူရှင်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး သတင်းစာအနေနဲ့လည်း များစွာအဆင်ပြေမှာဖြစ်လို့ပါ။ စာဖတ်သူ မြန်မာတို့တတွေလည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာတို့ရဲ့ သတင်းစုံစုံ သိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
* CNN iReport ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါမျိုး ပုံစံတူလည်း မန္တလေးဂေဇက်မှာ လုပ်ပါမယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာတွေ ထူးခြားတာလေးတွေ့ရင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်။ အက်ဆေးတိုလေးရေးပြီး တင်ပေးကြဖို့ပါ။ တင်တဲ့သူတွေဟာ CNN iReport လုပ်နည်းဟန်တွေအတ်ုင်းပဲ
(၃) မဟောင်းပဲ ကောင်းတဲ့သတင်းဓါတ်ပုံဖြစ်ရမယ်။
ဆိုတာလေးလိုက်နာပေးဖို့ပါ။ အဲဒီလို ပုံတွေကို သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြဖို့ရွေးရင်လည်း တပုံကို ၅ဒေါ်လာ ချီးမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ..အဲဒီငွေတွေကိုလည်း အပေါ်က ရံပုံငွေထဲ စုထည့်ပေးပါမယ်။
* လှူဒါန်းပေးပို့ မှုတွေမှာ အလှူရှင်တွေအမည်နာမတွေနဲ့ ထုတ်ပြန်လှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းစာမှာဖော်ပြနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုး မရေးနိုင်သေးတော့ ၁၀ စီနဲ့ မန်းရင်း တဖြည်းဖြည်း စုနေရပါတယ် … တစ်သိန်းပြည့်ရင် အကျိုးရှိမယ့်အလှူတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ် … ဒီဘ၀မှာတင် တစ်သိန်းပြည့်အောင်တော့ အတော်ကြိုးစားရအုန်းမှာ
အပေါ်က မဝေဝေ လို ပါပဲ ခင်ဗျာ ။ တစ်ကယ်လို့ ကျွန်တော်သာ မတော်မတဲ့ ချော်ချဲ့ (စာရေးဖို့ အိုင်ဒီယာ နဲသဖြင့် ) လို့ ပွိုင့် ၁ သိန်း ပြည့်ခဲ့လို့သူကြီး ပေးတဲ့ ၁သိန်းကျပ် ကို ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ရန်ကုန်က ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် လှူနေကြ ၊ ကျောင်းဆောက်နေကြတဲ့ သီလရှင်ကျောင်း ကို သွားလှူ မယ် လို့ စိတ်ကူး ထားတယ် ဗျာ ။ သို့ ဖြင့် “ တစ်နေ့ တစ်ပို့ စ် တစ်သိန်း ဘယ်မလဲ ” ထုံးကို နှလုံးမူ ကာ ကြိုးစားလျက် ရှိပါကြောင်း ။ အခုတော့ ၁၀ ရပြီ ဟီဟိ ။
ကြိတ်လိုက်ဟ ကိုတော်ကာရေ ကျွန်တော်လည်း ၁၀ ရပြီ အဟ :-)
မန်းဂေဇက် သဒင်းဒေါက် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုပြီး
မန်းဂေဇက် သဒင်းဒေါက် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု တဲ့ကွ
မှတ်ချက်။ ။ မာန်ပါပါဖြင့် အတွင်းအားသုံး၍ပြောထားသည်
ဒီဆိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဖိုရမ်တွေ ဆိုက်တွေက အရင်ထဲက ပရဟိတအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး လှူနေကြတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ တချို့ဖိုရမ်တွေဆို ဖိုရမ် ဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ဆိုပြီးလည်း ဖိုရမ်မန်ဘာများ စုပြီး ရပ်နီးရပ်ဝေးမှသူများ စုပေါင်းလှူဒါန်းလာကြတာ ၄ ၊ ၅ နှစ်ရှိလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလှူတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာ နှိုးဆော်မယ့်သူက အရင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ယူဦးဆောင်မှာလဲ။ ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမှာလဲဆိုတာတွေက အရေးကြီးသလို အလှူငွေတွေ ထိန်းသိမ်းရတာကလည်း အတော်မှ စုစုစည်းစည်းနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကျကတော့လည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လှူဒါန်းကြပါတယ်။ မနောကတော့ ဖိုရမ်တွေ ပရဟိတလုပ်တိုင်း ပါဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘမဲ့ကျောင်းတွေ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေ ရောက်ခဲ့ရသလို ရေအလှူဆိုပြီး ဒုက္ခရောက်တဲ့ ရွာတွေကိုလည်း ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မသေခင်မှာ ကိုယ့်နောက်ပါတာလေးတွေ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်သွားကြမယ်ဆို ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်။
အလှူ အတန်း ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စ တခုပါ။
မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
လိုအပ်နေသူလက်ထဲ ရောက်အောင် သွားထည့်ပေးဖို့ လိုတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် ရေဘေး လေဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို လှူတဲ့ လူက လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါက်ဆွဲ ခြောက် ထုတ် လှူလိုက်တယ်.. မြန်မာ လူမျိုး ထမင်းစားရမှ တင်းတိမ်တာ.. အဲလိုလေးတွေလည်း ရှိတယ်။
ဦးဆောင်မဲ့သူ ရှိရင် အနောက်က လိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ဆိုက်တခုမှာဆို မန်ဘာကြေး တလ ၂၀၀၀ ကောက်တယ် ပြီးတော့ စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ပြီး အလှူ တခုခု သွားလုပ်ကြတယ်။ သိပ်ဝန်မပိတဲ့ အလုပ်မျိုးလေးလည်း ဖြစ်တာပေါ့။
သဘောပြောပြတာပါ။ ဒီဆိုက်က တာဝန်ခံ သဂျီးဆိုတာ အမေရိကန်က ဆိုတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ အလှူတခု လုပ်လို့ ရွာသားတွေ ပိုက်ဆံ နဲ့ ဖြစ်ရင်တောင် သူကြီး ဘုရား ရွာသားကောင်းမှု ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အနောက် အင်အားကြီး နိုင်ငံကနေပြီး ထောက်ပံ့ကြေး ယူတယ်လို့ အများက ထင်စရာ ဖြစ်မယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ကိုယ့် အစုအဖွဲ့အလိုက်သာ စုပြီး လှူကြ တမ်းကြပါ။ အလှူ အကြောင်း ပိုစ်လေးတွေ တင်ပေးပါ ရွာသူ ရွာသားများ မုဒိတာ ပွားပြီး စိတ်ပါလာကြအောင်ပါ။
ဒါကတော့ ဆူး အမြင်ပြောပြတာပါ။
အဖွဲ့အစည်း တခု လုပ်မယ် ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်း စည်းမျည်း စည်းကမ်း ဥပဒေတွေနဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေ အများကြီး ရှိတယ် မသိသေးတာတွေ အများကြီး ရှိသေးတဲ့ အတွက် ဦးဆောင်နိုင်သူ ရှိရင်တော့ ဦးဆောင်ပြီး ဖြောင့်ဖြောင့် သာ လုပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လှူဖို့ဆိုတာ အချိန်သိပ်မပေးဖြစ်ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ကြိုတောင်းပန်ထားတယ်နော်…
တချိန်ချိန်မှာ.. ရွာသားတွေစုထောင်ထားတဲ့.. တရားဝင် အန်ဂျီအိုတခုအထိတောင်မျှော်လင့်မိတာပါ.။ဒါပေမဲ့.. စလုံးရေစ တောင်…မလှမ်းနိုင်ဖြစ်နေတော့ကာ…
သူကြီးက ပါးစပ်ပြောလေး လွယ်လိုက်တာ။ ခင်ဗျားက ဟိုမှာနေပြီး အေးအေးသက်သက်သာသာ နဲ့ နေပြီး လေနဲ့ စီမံကိန်း ကြိုက်သလို ဆွဲနိုင်တာပေ့ါ။ ဒီကို ဘယ်နှခေါက်ပြန်လာပြီး ဒီကအကြောင်း ဘယ်လောက်သိလဲ။ စာအုပ်ပေါ်က၊ သတင်းဝဘ်ပေါ်ကဟာတွေ ပြောပြီး ငါ အကုန်သိတယ် မလုပ်ပါနဲ့။ အဲဒါ အတိုင်းအတာ တခုအထိပဲရှိတယ်။ ဒီမှာ လွယ်တာမှတ်လို့။
ဟိုတလောက အပြင်မှာတွေ.ဆုံပွဲလုပ်ဖို. ချိန်းကြတယ်ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရလို.။ဒီပို.စ်ကိုတင်မိတာပါ။
ရန်ကုန်ကအဖွဲ.၀င်တွေ လုပ်သင်.ပါတယ်လို.အကြံပြုပါတယ်။ကျွန်တော် ဦးဆောင်ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ. အသက်အရွယ်အရရော အတွေ.ကြုံအရရော ဘယ်သူမှမလေးစားလောက်ပါဘူး။
အမှန်ပြောရင် ကျွန်တော်ထက်အဖွဲ.ထဲမှာ အသက်ကြီး အတွေ.ကြုံများတဲ.လူတွေအများကြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဦးဆောင်ပါလို.ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အကြံသာပြုရတာပါ ဦးမဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။
မနောကတော့ ဖိုရမ်တွေ ပရဟိတလုပ်တိုင်း ပါဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီတော့ကာမနောက အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက် မနောနဲ့ ရွှေဘိုသားအပြင်မှဆုံပြီး
ဆွေးနွေးလိုက်ရင် ဒီကိစ္စအောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်ဗျာ။
လောလောဆယ်မလုပ်ဖြစ်သေးတောင်မှ ရွာသားတချို့ အပြင်မှာစုတွေ့ဘို့ စကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံတွေ ရွာထဲဝင်ပြောပေါ့။ ဒီလိုနဲ့စိတ်ပါသူပိုများလာ ပိုစုစည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အစ ဆိုတာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် စ ဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တနေ့က ကိုfatty ဖိတ်ခေါ်သလို တယောက်ယောက်က စ ဖိတ်ခေါ်ပြီး –
အနည်းဆုံး ၂ ယောက် စ ဆုံဖြစ်ရင်ရပါပြီ။ အဲဒါရွာထဲဝင်ပြောတာနဲ့ ပွားသွားမှာပါပဲ။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ အကြံကောင်းတွေ တော်တော်ပေးနိုင်ကြသလို၊ အတွေအကြုံးများကြသူတွေ လို့ ယူဆပါတယ်။ လှူးကြရာမှာ၊ ဘာသာရေးကင်းပြီး လက်ခံသူထံ တိုက်ရိုက်အပြည့်အ၀ရောက်နိုင်ရင်ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတက်တက်ကြွကြွလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိသလို၊ NGOs တွေရှိပေမဲ့ အဖွဲ့စည်းမျဉ်းနဲ့ ၀ါဒပေါ်မူတည်တာမို့၊ တဥိးချင်းက လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြ၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံကအလှုကိုလက်ခံပြီးတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးနိုင်ရင်ပြီးသွားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လိုအပ်ချက်သတင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို ၀ကိဆိုက်မှာတင်၊ စုပေါင်းထဲ့ဝင်လှူပြီး၊ အဲ့ဒီတာဝန်ခံကအိမ်တိုင်ရာရောက်ပံ့ပိုး… ဒါဆိုရင် လှုကြသူတွေ သဒ္ဓါပေါက်ပြီးနောင်အတွင်လဲ အဆင်ပြေပါ့မယ်။
အရေးကြီးတာက…စိတ်အားထက်သန်ပြီး၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနိုင်သူ ရှာဘို့ပါဘဲ။
MG ကတော့ ကြားခံဆက်သွယ်ေ၇း mediation ပေါ့….။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တော့ မလုပ်ဖူးပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ နီးစပ်သူတွေ စုပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်လ ၃၀၀၀ အလှူငွေ ထည့်ဝင်ကြတယ်။ လိုအပ်နေတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်း (ဦးလှထွန်း ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းတို့၊ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတို့ စသည်ဖြင့်) တွေကို တတ်နိုင်သလောက် သွားလှူဖူးပါတယ်။ လိုအပ်သလောက် အင်တိုက်အားတိုက်တော့ မလှူနိုင်သေးပါဘူး။ စိတ်ရင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်မယ့်၊ အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေတော့ လိုတာပေ့ါ။ စိတ်ဝင်စားသူများရင် ဖြစ်မြောက်ဖို့ အလားအလာ များပါတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ ပါဝင်အားဖြည့်ချင်ပါတယ်။
ွှအလှူတန်း အ ကြံကတော့ ကောင်းတယ် … ဒါပေမဲ့ လူစုဖို့ လုံးဝ လုံးဝ မလွယ်ပါဘူး … ။
အားလုံးက သတ္တိခဲချည်းပဲ … လမင်းကဗျာချိန်းတုန်းက သွားမယ်ဆိုပြီး အင်တိုက်အားတိုက်ဝင်ဖောတဲ့လူတွေ အများကြီး တယောက်မှ မသွားတာ လက်တွေ့ပါပဲ … ။
အခုလိုအစဖော်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. အရင်ဦးဆုံးတော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို စုပြီးတော့ မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပွဲလေးပြုလုပ်ပြီးတော့ အလှူအတန်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သိပါတယ် …….
အခုကတည်းက စပြီးလှုပ်ရှားရင် သီတင်းကျွတ်လောက်ဆို
အစကတော. နည်းနည်းချင်းပဲ စရမှာပေါ.
မနောဖြူ တို. အိတုန်တို. လမင်းကဗျာ တို.အရင်တစ်ခါလို တွေ.ဆုံပွဲလုပ်ဖို.စီစဉ်ပေးပါ
အနည်းဆုံး ကျွန်တော် တစ်ယောက်တော.သေချာပေါက်လာမှာပါ
ကျွန်တော်ရောက်ပြီးမကြာခင်ဘဲ အလှုအတန်းတွေ အကြောင်းကြားရတာ မင်္ဂလာ ရှိလိုက်တာဗျာ။
ရန်ကုန်က အခြေအနေတွေကို ကောင်းကောင်း မသိသေးတော့ အားလုံးကို စုစည်း ပေးဘို့ မစွမ်းနိုင်သေး
ရွာသားတွေ အလှုလုပ်ဖို့ စုစည်းဖို့ကို “သဘာဝတရားရိပ်သာ (သို့) အားကိုးရာအစစ်ကို ရှာဖွေသူများအတွက်” ဆိုတဲ့ နေရာလေး ဆို ကောင်းမလားလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
သံလျှင် ဆိုတာ သိပ်မဝေးတဲ့ အပြင် သီးသီးသန့်သန့်လေး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။